Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
January 8, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaadiidka gurmadka oo caawinaya dadka ku waxyeeloobay qaraxa ka dhacay isgoyska Sayidka, Janaayo 8, 2020, Muqdisho. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax gaari ayaa ka dhacay gudaha Muqdisho maanta oo Arbaco ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan.
Qaraxa oo ahaa gaari uu waday qof naftiis halige ah ayaa ka dhacay isgoyska Sayidka oo u dhow xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliya.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen qaraxa, ku dhawaad 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxa, sida ay tabisay Radio Andalus, oo ay leedahay maleeshiyadu.
December 28, 2019, ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhimatay qarax loo adeegsaday gaari weyn oo ka dhacay Muqdisho, oo ay sheegatay masuuliyadiisa Al-Shabaab.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in doorashada maamulka Koonfur Galbeed lagu qabto xilligeeda. “Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay faraysaa madaxda Dowlad [...]